उबुन्टु सुरू गरेको बेला कसरी हार्ड ड्राइवहरू माउन्ट गर्ने Ubunlog
उबुन्टुको नयाँ संस्करणहरू अन्य फाईल ढाँचाहरूसँग मात्र उपयुक्त छैन तर हामीलाई हाम्रो प्रणालीमा जन्मजात सुविधाहरूको श्रृंखला पनि अनुमति दिन्छ जुन बनाउँछ। हामी ती हार्ड ड्राइभहरू वा ती फाईल स्वरूपहरूसँग राम्रोसँग काम गर्न सक्दछौं।
यस सानो ट्यूटोरियलले हामीलाई कसरी उबुन्टुले हार्ड ड्राइव हामी सुरु गर्न चाहान्छ वा कसरी माउन्ट गर्दैन भन्ने कुरा सिक्छ। यो व्यावहारिक कुरा हो र हामीले यसको लागि टर्मिनललाई छुनु आवश्यक पर्दैन, कि छ, यो newbies लागि हो।
उब्बन्टुको साथ हार्ड ड्राइभहरू चढाउनु एक साधारण प्रक्रिया हो
सुरु गर्न हामीले जानु पर्छ ड्यास र "डिस्क" अनुप्रयोग खोज्नुहोस्। एक पटक अनुप्रयोग खोलिए पछि हामी बाँया पट्टि हेर्छौं ड्राइभ वा हार्ड डिस्क हामी चाहान्छौं कि यो स्टार्टअपमा माउन्ट होस् वा उबुन्टु सुरु भएपछि लोड नगर्नुहोस्।
एकचोटि हामीले यसलाई चिनो लगायौं भने, दायाँपट्टि बारमा हामी थिच्दछौं पा whe्ग्राहरू र हामी जान्छौं "माउन्ट कार्यहरू सम्पादन गर्नुहोस् ...We जब हामी यो विकल्प थिच्दछौं, निम्न जस्तो एक स्क्रिन देखा पर्नेछ
यस स्क्रिनमा हामीले हामीले चाहेको विकल्पहरू छनौट गर्नुपर्दछ, जस्तै उब्न्टु सुरु हुँदा पार्टिशन वा हार्ड ड्राइभ माउन्ट हुन्छ वा केवल यो माउन्ट छैन कि। हामी हार्ड ड्राइभको नाम पनि लिन सक्छौं र उबुन्टुले यसलाई यो नाममा कल गर्न सक्छौं, हामी फाँट दर्ता गरेर यसलाई प्राप्त गर्नेछौं «नाम देखाउनुहोस्«; हामीले गर्न सक्ने अर्को कुरा भनेको इन्टरफेसमा विभाजन देखाउनु हो वा यसलाई इन्टरफेसमा नदेखाउनु हो।
हामीले चाहेको विकल्पहरू मार्क गरिसकेपछि, हामी स्वीकार बटनमा जानुपर्नेछ ताकि कन्फिगरेसन कायम रहनेछ। त्यसपछि हामी डिस्क कार्यक्रम बन्द गर्छौं र यो हो। जब हामी उबन्टु अर्को सत्रको साथ शुरू गर्दछौं, यी कन्फिगरेसनहरू पहिले नै काम गर्दैछन् र उबुन्टुले हार्ड ड्राइभहरू माउन्ट गर्नुपर्नेछ जुन हामीले चिनो लगाएका छौं.
म व्यक्तिगत रूपमा यो लाग्छ एक सरल र छिटो विधि हार्ड ड्राइभको पार्टनहरू र माउन्टहरू कन्फिगर गर्न, तथापि यो तपाईले नियमित रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने कुरा होइन, यद्यपि यो हातमा राख्नु राम्रो हुन्छ, के तपाई सोच्नुहुन्न?
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » उबुन्टु सुरू गरेको बखत कसरी हार्ड ड्राइभहरू माउन्ट गर्ने
श्री पाक्किटो भन्यो
यस उबुन्टु उपकरणले सँधै मलाई स्टार्टअपमा माउन्टिंग डिस्कहरू दिन समस्या दिएको छ, त्यसैले म fstab मा हातले गर्छु।
यद्यपि मैले लामो समयदेखि प्रयास गरेको छैन र एक समस्या ठीक भएको हुन सक्छ।
हामीले यो प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
Señor Paquito लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, म एलेमेन्टरी ओएस प्रयोग गर्दछु र मसँग त्यो अनुप्रयोग छैन र न यो एपसेन्टरमा देखा पर्दछ, के त्यहाँ टर्मिनलद्वारा यसलाई स्थापना गर्ने कुनै तरिका छ?
मेरो डिस्कहरू सुरुवातमा लोड हुदैन, त्यसो गर्न प्रणालीको लागि आवश्यक चेकमार्कहरू भएता पनि।
यो २०१ u पछि सबै उबन्टुमा भयो। किन यो हुन्छ वा कसरी यसलाई ठीक गर्ने मलाई थाहा छैन।
गोंजालो कास्टिलो प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
उत्कृष्ट! यसले मेरो लागि ठूलो काम गर्यो। धेरै धेरै धन्यवाद!
गोन्जालो कास्टिलोलाई जवाफ दिनुहोस्
कार्लोस कोक्स भन्यो
धन्यबाद म उबन्टु १.18.04.०XNUMX Lts मा तिनीहरूलाई परीक्षण गर्‍यो र यो धेरै राम्रो तरीकाले काम गर्दछ
म यसलाई परीक्षण गर्दैछु, साम्बाद्वारा नेटमा अर्को हार्ड ड्राइभ साझेदारी गर्दै।
कार्लोस कोक्सलाई जवाफ दिनुहोस्
जैमे रीस भन्यो
ठीक छ, मैले "डिस्कहरू" फेला पारेँ र म डिस्कहरूको सूची पाउँदछु। मलाई रुचि छान्नुहोस्, तर म कुनै "साना पाels्ग्रा" पाउँदिन, न त मैले "सवारी" वा यस्तै प्रकारको केहि पाउनको लागि कुनै तरीका भेट्टाएँ।
Jaime Reus लाई जवाफ दिनुहोस्
AL-X- वा भन्यो
उबुन्टु २०.०20.04.2.२ LTS, bit 64 बिट, GNome V.3.36.8 मा बनाइएको।
अब हेरौं कि यसले कसरी पुनरावर्ती आधारमा काम गर्दछ। खैर, यदि तपाईंसँग टर्मिनलबाट माउन्ट गर्ने आदेशहरू छन् भने तिनीहरूलाई राख्नु उचित हुनेछ, मेरो केसमा म टर्मिनलको प्रयोगमा विशेषज्ञ होइन।
AL-X-OR लाई जवाफ दिनुहोस्
अल्बर्टो ओसोरियो भन्यो
कृपया मलाई Ubuntu 20.04 मा DASH कसरी पत्ता लगाउने भनेर बताउनुहोस्
Alberto Osorio लाई जवाफ दिनुहोस्